Nke a Hawaii ụgbọ okporo ígwè na nkewa maka njem nleta na obodo, na ga-anabata gị aloha!
Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Nke a Hawaii ụgbọ okporo ígwè na nkewa maka njem nleta na obodo, na ga-anabata gị aloha! » Page 3
Mygbọ okporo ígwè m banyere na Oahu bụ ihe ọchị ọtụtụ ụnyaahụ, mana ọ bụghị ọtụtụ na Hawaii maara banyere ya. Enweghị ego ọha na eze maka ụgbọ oloko na-arụ ọrụ, mana ihe ruru ijeri dollar 11.4 ka eme atụmatụ iji mee ka ọrụ ụgbọ oloko Honolulu na-aga.
Ruo ihe karịrị afọ 20, arụmụka maka mmepe nke ụgbọ okporo ígwè na Honolulu abụwo isi okwu na-ese okwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mpaghara, ọkachasị na-eduga na nhoputa ndi isi obodo nke 2008, 2012, na 2016. Ndị na-akwado usoro a na-ekwu na ọ ga-ebelata mkpọchi okporo ụzọ na-akawanye njọ, nke dịbu n'etiti ndị kacha njọ na United States.
Ha na-ekwusi ike na agglomeration mepere emepe nke dị na ndịda Oahu dabara adaba maka ụgbọ okporo ígwè. Na mmegide, onye na-akwado ụzọ n'okporo ụzọ bụ Panos Prevedouros na-ajụ ọnụ ahịa ya bara uru ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ ma na-azọrọ na ọ ga-enwe mmetụta dị ntakịrị n'akụkụ mkpọchi okporo ụzọ. Groupstù ndị ọzọ na-ajụ ụgwọ ọ na-akwụ yana ịkwụ ụgwọ n'ahịrị na-ejighị ya rụọ ọrụ na mpaghara ha.
Ihe oru ngo a na-enweta ego site na nfefe na ụtụ isi obodo tinyere ego ijeri $ 1.55 site n'aka Federal Transit Administration (FTA). Mgbe emechara nnukwu ego, ụtụ ụtụ ka agbatị na 2016 site na afọ ise iji bulie ijeri $ 1.2 ọzọ; agbanyeghị, ego ọzọ agbakwunyere maka owuwu ya na Middle Street na Kalihi. FTA kwuru na onyinye ya dị mkpa iji mechie akara ahụ gaa Ala Moana Center ma agaghị abawanye.
Mgbe esemokwu gasị, ndị omebe iwu steeti ahụ na 2017 kwadoro ụtụ ijeri $ 2.4 iji nye obodo ahụ ohere iji rụchaa ọrụ ahụ dịka atụmatụ mbụ.
Usoro iji nye nkwekọrịta ahụ maka iwulite ngalaba ikpeazụ 4.3 km (6.9 km) site na etiti obodo Honolulu ka a kwụsịtụrụ na 2015. A maliteghachiri usoro a na Septemba 2017 ma atụ anya na ọ ga-ewe ọnwa iri na asatọ. E nyere nkwekọrịta mbụ mbụ, nke e mere atụmatụ na $ 400, na May 2018.
Costgwọ ikpeazụ a toro site na atụmatụ nke $ 4 ijeri 2006 ruo n'agbata ijeri $ 9 na $ 10 site na 2017.
Ndị nkatọ akpọọla maka "nyocha gbasara ọdịmma mmadụ" iji mata ihe kpatara mmụba ahụ. Iwu mmụba ụtụ isi nke etinyere na 2017 chọkwara onye nyocha steeti ka ọ rụọ nyocha nke akaụntụ ahụ wee tụlee ụzọ ndị ọzọ iji mezue usoro ahụ.
Maka ihe ndị ọzọ na Hawaii Historical Railway, gaa www.hawaiianrailway.com/